crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> July | 2020 | HimiloNetwork
Himilo July 30, 2020	Leave a comment 202 Views
MUQDISHO (HN) — Shabakadda Himilo oo sannadkii 5aad u dabaal-degaysa markii la aas-aasay, waxay munsaabadda Ciidul-Adxa awgeed ay hambalyo iyo bogaadin hawada usoo marinaysaa dhammaan umadda Muslimiinta ah – gaar ahaan bulshada Somaaliyeed. Shabakadda HimiloNetwork waxay u rajeynaysaa umadda Islaamka ah iyo bulshada Muslimiinta meel walba oo ay dunida ka joogaan inay ku ciidaan caafimaad iyo farxad. Waxaa kale oo ...
Himilo July 26, 2020	Leave a comment 564 Views
DELHI (HN) — 95 jir u dhashay Hindiya ayaa sheeganaya inuusan weligiis maalin jarin timihiisa oo dhererkoodu sii dhaafayo 24-feet ama (7.3 meters). Marwalba oo soconayo dhakadiisa waxaa tuurma isu-tagga timihiisa oo dad badan aragtidiisa ay la yaab awgiis sunniyaha la taagaan. Xilli in badan ay ka walaacsan yihiin inaysan booqan karin goobaha lagu qurxiyo timaha, 95 jirkan dan kama ...
Himilo July 26, 2020	Leave a comment 483 Views
BEIJING (HN) — Wiil 15 jir ah ayaa loola cararay isbitaalka kaddib markii uu ku dhacay xanuunka qalalka ‘stroke’ kolkii uu si joogto ah ugu ciyaaray fiidiyow-game muddo bil ku siman. 24-kii saac wuxuu ka hurdi jiray laba saac oo kaliya. Inta kale wuxuu ku mashquulsanaa ciyaarta fiidiyowgame-ka. Inankan oo lagu magacaabo Xiaobin wuxuu sida inta kale ku xayirnaa gurigiisa. ...
Geelkii – 100 km usoo jaray – si uu ula midoobo Geeljirihiisa!
Himilo July 26, 2020	Leave a comment 490 Views
MUQDISHO (HN) — Geel guri-jante ah oo afka qalaadna lagu yiraahdo ‘homesick’ ayaa degay qalbiyada malaayiin Shiinees ah kaddib markii la ogaaday inuu fogaan dhan 100 km usoo jaray si uu dib ugu soo noqdo guriga mulkiilihii lahaa – sideed bilood kaddib markii la iska iibiyay. Wuxuu soo xulay saxaraha dhulka Mangolia ee dalka Shiinaha isaga oo maalmo badan kusoo ...
Himilo July 26, 2020	Leave a comment 428 Views
JAKARTA (HN) — Sidka dhalmada haweenku waxay aalaaba ku buuxsantaa 9 bilood, laakiin haweeney ku nool Induniisiya ayaa sheeganaysa inay umushay saacad kaddib markii ay dareentay calaamadaha lagu garto haweenka uurka leh. Sheekadeeda ayaa hadda hadal-heyn qaran ka noqotay gudaha dalkaas. Heni Nuraeni, oo 30 jir ah, waxay lagu soo waramay inay dhashay cunug caafimaad qaba oo saacad kahor ay ...
Himilo July 13, 2020	Leave a comment 532 Views
BEIJING (HN) — 50 jir u dhashay Shiinaha wuxuu 30-kii sano ee lasoo dhaafay u afar-dhigan jiray sida Daanyeerka isaga oo xittaa geedaha sidiisa oo kale u koraya. Chen Haigang waa nin jecel jimicsiga oo ku nool Shanxi, wuxuu soo jiitaa dareenka dadweynaha marwalba oo ay arkaan isaga oo sida Daanyeerka u soconaya. Mana ahan hadda oo kaliya. Wuxuu sidan ...
Gudaha Masjidka Hagia Sofia.
Himilo July 13, 2020	Leave a comment 818 Views
ANKARA (HN) — Hagia Sofia waxay dhacdaa bartamaha Istanbul waana dhismo aad u ballaaran oo la micno ah ‘Xikmaddii Barakeysneyd’. Qarniyo badan waxay Kaniisadda ugu weyn oo ay ku cibaadeystaan Biizandiiniyiinta. Waxaa dhisay Boqorkii Bizantiin, Justinian sannadkii 537. Markeedii hore oo ay ahayd Kaniisad, mar danbe waxaa laga dhigay Masjidka weyn ee Qustandiiniyah. Waa markii ay qabsadeen Cusmaaniyiintu dhulkii Boqortooyada ...
Himilo July 5, 2020	Leave a comment 313 Views
LONDON (HN) — Islaamku wuxuu siiyaa xaqdhowr iyo dhegwanaag qofka bani aadamka ah kahor inta uusan ifka imaan iyo kaddib geeridiisa. Marka uu qofka ka faaruqayo nolosha adduunyada, Eebbe SWT wuxuu jideeyey in si sharaf leh loogu xabaalo dhulka. Koox Muslimiin ah ayaa, si kastaba, waxay isaga yimaadeen inay isu-taagaan nadaafadda iyo bilicda xabaalaha Derby ee UK. Waxay howlo isugu ...
Muslimiinta Malawi oo helay turjumada Qur’anka oo ku dhigan afkooda